Dhibcaha AnTuTu ee Lenovo Z6 Pro ayaa la muujiyay | Androidsis
Waxay noqotay wax iska caadi ah taleefannada casriga ah ee soo socda inay ka soo muuqdaan barnaamijyada miisaamidda sida AnTuTu, Geekbench, iyo Master Lu, marmarka qaarkoodna shirkadda lafteeda ayaa muujisa buundooyinkan ka hor inta aan la bilaabin.
Markan, wuxuu ahaa Madaxweyne-ku-xigeenka Lenovo Chang Cheng oo go'aansaday inuu la wadaago Dhibcaha AnTutu ee Lenovo Z6 Pro iyada oo loo marayo koontadaada Weibo. Sidii la filayay, calanka xiga ee weyn ee Shiinaha ayaa maamusha inuu si fiican u dhaliyo barxadda benchmak.
Sawirka ay wadaagaan Chang Cheng ee aan hoos ku helno, waa laga arki karaa taas Lenovo Z6 Pro wuxuu dhaliyay qiyaastii 403,077 dhibcood AnTuTu. Qaar kale kalsooni con Snapdragon 855 Waxay u muuqdaan inay goolal ka hooseeyaan 400, marka tani waa tiro aad u fiican. Si kastaba ha noqotee, waxaan badanaa aragnay in dhibcaha rasmiga ah ay ka buuxan yihiin kuwa nolosha dhabta ah.
Lenovo Z6 Pro oo ku yaal AnTuTu
Waxaan horeyba u ogaanay qeexitaannada Lenovo Z6 Pro. Mobilada ayaa yeelan doona a Qalabka afar geeslaha ah ee gadaasha gadaal u leh teknolojiyada muuqaalka 'Hyper Video'. Waxaan sidoo kale si faahfaahsan u soo daboolnay tilifoonnada iyo qaabeynta kamaradda. Halkan.
Marka aan fiirino tusmada taleefanka, waan ognahay taas wuxuu la imaan doonaa Snapdragon 855 gudaha, sidaan horeyba u fiiqnay, oo leh muraayadaha indhaha ee 2.39cm iyo kamaradda weyn ee 48 MP AI. Qalabka kamaradaha afaraad wuxuu awood u leeyahay inuu soo qaado 100 sawir oo sawir ah. Intaa waxaa dheer, shirkadda ayaa xaqiijisay inay iskaashi lala yeesho astaanta ciyaaraha Legion ee horumarinta taleefankan.
Ugu dambeyntiina, waxaa habboon in mar labaad la adkeeyo in waxqabadka sare ee shirkadda Aasiya waxaa la bilaabi doonaa tan soo socota ee Abriil 23 (toddobaad ka yar). Haddaba la soco faahfaahin dheeraad ah. Waxaan soo qaadan doonnaa adeegsiga mobilada oo aan siineynaa dhammaan faahfaahinta ku saabsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Dhibcaha AnTuTu ee Lenovo Z6 Pro ayaa la muujiyay